Shir loogu baaqay DF iyo Maamul Goboleedyada | KEYDMEDIA ONLINE
Shir loogu baaqay DF iyo Maamul Goboleedyada
Qoraal ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka 2021-ka ayaa looga dalbaday DF iyo Maamul Goboleedyada inay fuliyaan heshiiskii 17-kii September.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddigu wuxuu Golaha wada-tashiga Qaran ugu yeeray in ay deg deg isugu yimaadaan si loo xalliyo tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray Magaalada Muqdisho.
Guddigu wuxuu soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan dhex maray Xukuumadda iyo Midowga Musharixiinta waxayna ku booriyeen in ay sii wadaan dadaallada la isugu soo dhoweynayo dhinacyada siyaasadda iyo daneeyayaasha kale ee doorashooyinka.
“Guddigu wuxuu soo dhoweynayaa heshiiskii dhawaan ay wada galeen Midowga Musharixiinta iyo Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa is fahamka waxyaabihii dhacay”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay guddiga lagu muran san yahay.
Warka ka soo bacay Guddiga Doorashooyinka Dadban ee lagu muransan yahay ayaa loogu mahad celiyay dhamaan dadkii dadaalka ku bixiyay heshiiskii uu Rooble la galay Mucaaradka 25-kii Febaraayo.
Xalka kaliya ee looga gudbi karo marxaladda taagan ayay ku sheegeen in dalka ay qabsoonto doorasho la isla ogol yahay waxayna xuseen in ay diyaariyeen habraacyadii doorashooyinka.
Waxaa la filyaa in qeyb ka mid ah guddigaan la baddalo, kuwaas oo ay tabasho ka keeneen Mucaaradka.